Chinja Yako Mitengo paDhijitari Ekubhukisa Webhusaiti neZeevou's Kukwidziridzwa
Features » kushambadza
Dhiraivha yakawanda traffic kuburikidza neyako yakananga kubhuka webhusaiti nekumisikidza uye kuratidza yakaderedzwa mitengo.
Pane dzimwe nzvimbo mukumhanyisa yako PMS bhizinesi, iwe unofanirwa kushandisa yako mitengo. Zvichienderana nemamiriro akasiyana siyana uye marongero, izvo zvivakwa zvaunosimudzira pane akasiyana maOTA zvinogona uye pamwe zvichave nemitengo yemitengo yakasiyana kubva kune yako yakananga kubhuka webhusaiti. Nedu Chikamu Chekusimudzira, mitengo nyowani inogona kuve nyore kuitirwa.
Ruzhinji rwevagari vanofara kutapudza mitengo iyo yavanopa kumaOTA uye kunyora masosi pachavo yakananga kubhuka mawebhusaiti. Vachidaro, vanogona kunyatsopatsanura komisheni yavari kuchengetedza nevashanyi vavo. Aya ndiwo mamiriro ekukunda-kuhwina ayo anogona kukupa iwe vashanyi zvakananga kudhara kushomeka.
Imwe nyaya yakakosha idambudziko maererano nemitengo iri kudzikira yezvivakwa zvako. Zvakawanda injini yekubhuka vanopa havape izvi kugona kwekudzikisira mitengo kana kuvadzikisira nenzira yauri kuedza kuwana. Kuwedzeredza kukwidziridzwa kunogona kazhinji kukonzeresa nyaya, senzira iyo dhokotera rese rakaverengerwa inogona kunetsa.
Kunyangwe kana izvo zvataurwa pamusoro zvisina kuunza nyaya panogona kuve paine matambudziko nemaitiro ekutengesa. Unoda sarudzo dzakajeka uye dzakananga. Muzviitiko zvakawanda, varidzi vanogona kusangana nematambudziko kana vachiedza kumisikidza kushambadza izvo zvinogona kukonzera kukakavara kwemitengo.
Semuyenzaniso; kana iwe uchida kuisa zvidzikiso pane imwechete kana zviviri zvivakwa, asi yako system haizokutenderi. Kana pane chiitiko chakakosha icho chaunoona chakakodzera kupa vatengi vako nevashanyi mutengo wakanaka kune yakatarwa nguva. NaZeevou unogona kukunda zviri nyore nyaya idzi uye kumhanyisa kukwidziridzwa uye uye kana uchida nemitengo yemitengo yakanakira bhizinesi rako.
Zeevou's Kukwidziridzwa kunogona kubatsira sei?
Zeevou inoziva iyi nyaya uye yakaisa mari mune yayo Ekusimudzira ficha kuti ikubatsire iwe kuwana zvakanyanyisa kubva panguva yako, mari, uye mazano. Isu takagadzira hurongwa hwemberi hwekuvaka uye kushandisa kushambadza kune chaiwo mayuniti mhando. Nekushandisa Zeevou's Kukwiridzira ficha, vatambi vanokwanisa kudoma kuti kushambadza kunofanira kuverengerwa, uye nemazuva api avanofanira kunyorera. Naizvozvo, dambudziko rekusimudzirwa kumwechete kunoshandiswa kune ese eimba uye mazuva anogadziriswa. Zvakare, isu tinopa vanopa mukana mukana wekuwana mukana uzere pamusoro pekujekesa mamiriro anofanirwa kusangana neakananga mabhuku kuitira kuti kukwidziridzwa kuitiswe.
Kukwidziridzwa kunogona kuratidzwa kuburikidza ne injini yekubhuka yakavakwa mukati meZeevou yemahara zvachose yakananga kubhuka mawebhusaiti. Nekudaro, vashanyi vanogona kuwana zvirinani kushambadziro dzinopihwa nevavanotambira uye vodzishandisa kuti vatore mutero. Nenzira iyi, ivo vanogashira vanogona kuve nemifungo yakajeka uye chiono pamusoro peichi chiitiko uye voita chokwadi chekuti zvakatsiga izvi zviri kuitika sei. Ichi chimiro, chinodzora kushushikana kwekuvhiringidzika kunogona kuitika kune vashanyi pavanenge vachishandisa izvo zvidzikisira uye kuvagonesa kuva neruzivo rwakakura rwekuverenga. Mauto anokwanisa kutengesa imba yavo husiku, kana mapakeji anosanganisira wedzera-wanda, pamutengo uri nani pane vaenzi vanokwanisa kupfuura chero yeiyo 200+ OTAs uye zvinyorwa zvinyorwa iyo Zeevou Channel Manager inosangana ne.
Kuvimba kwevatengi uye kuvimbika ndiyo yakanyanya kukosha nzira yekuvimbisa kubudirira kwako muindasitiri yekugamuchira vaeni. Vako vashanyi vanoda kuve nechokwadi chekuti vane yakanakisa chiitiko kubhuka kwenguva pfupi rega kubva kukambani yako uye yakananga webhu saiti. Kune nzira dzakawanda dzekuwana kuvimba kwevatengi vako, asi yakakosha ndeyekuvavimbisa kuti iwe uri kudivi ravo, iwe wakawana musana wavo uye unovapa iwo akanakira dhiri. Kupa vashanyi zvimwe zvekudzikisira uye kuvaita kuti vahombe chivakwa kubva pawebhusaiti yako nemutengo wakaderera ndiro danho rekutanga reiyi nzira.
Nekushandisa Zeevou's Kukwidziridzwa, iwe unogona kubatsira kutyaira traffic kune yako webhusaiti uye kuvaka brand kuvimbika. Kuburitswa inzira yechokwadi yekukwezva vaenzi kuti babhukire zvakananga newe. Vatengi vanotsvaga mutengo wakanakisa, saka pavanoona yako yakananga kubhuka webhusaiti senge iyo inovapa zvinonakidza zvidzikiso, ivo vanozove vanoshuvira zvikuru kutora nzvimbo kubva kwauri kuzororo ravo, rwendo rwebhizinesi, kana kugara kune rimwe guta kune nguva pfupi nekuda kwedzidzo. Tichifunga kuti dzinogona kuitwa zvine mutsindo pakushandiswa kwe makodhi evavhoti, unogona kushandisa chinhu ichi kunyangwe mune dzimwe nyika umo zvikamu zveyero-parity zvinoshanda nemaOTA.
Isu tine hanya nekubudirira kwebhizinesi rako pano paZeevou. Saka, na kukumbira demo remahara uye kushandisa yedu zvinhu unogona kuwedzera kubudirira kwako.